Fanavaozana lehibe ny PreferensiLoader | Vaovao IPhone
Fanavaozana lehibe amin'ny PreferensiLoader dia manampy fampifanarahana amin'ny iOS 9
Raha nilaza izy ora vitsivitsy lasa izay fa tsy nahomby mihitsy i Saurik dia nanao izany marina izy. Saika tamin'ny fotoana nanombohan'ny Pangu ny fitaovana hampiasàny ny jailbreak iOS 9.0-9.0.2, ilay mpandraharaha frantsay tompon'ny Cydia dia nanavao ny Cydia Substrate mba hanomezana mifanentana amin'ilay jailbreak vaovao. Amin'io andro io ihany Dustin Howett nanao toy izany koa tamin'ny fanavaozana PreferensiLoader mankany amin'ny kinova 2.2.3-1. Manomboka izao dia afaka milaza isika fa manana jailbreak efa ho 100%.
Fa maninona aho no miteny fa manana jailbreak efa ho 100%? Satria mandra-pahatongan'ny PreferensiLoader dia mifanaraka amin'ny rafitra vaovao sy ny jailbreak vaovao, ny Cydia tweaks izay manana preferences manokana dia mety tsy miseho amin'ny toe-javatra, toy ny nitranga tamin'ny fitaovana farany natomboky ny ekipa mpijirika sinoa. Ankehitriny, raha tsy misy ireo mpamorona manavao ny tweaks ataon'izy ireo, dia manana jailbreak miorina sy miasa tanteraka izahay.
Raha efa nigadra ianao dia tsy mila manao zavatra manokana. Mila miditra Cydia fotsiny ianao, miditra amin'ny Takelaka amin'ny endritsoratra hamerenana ireo fonosana ary hiditra amin'ilay kiheba fanovana, izay hiandrasan'ny fanavaozana PreferensiLoader anao.
Ho an'ireo izay tsy mahalala, izay fantatro fa ho vitsy, ity fanavaozana ity dia zava-dehibe ho an'ireo voalaza etsy ambony ireo fa ny fikajiana dia azo alamina ka mandraka ankehitriny dia tsy afaka namboarina. Ohatra, raha mametraka Zeppelin isika dia efa afaka manamboatra ny mpikirakira araka izay tiantsika, na afaka manova ny bokotra an'ny CCSettings isika misimisy safidy hiseho. Tsy lazaina intsony fa misy ny fanitsiana sasantsasany, vitsy, fa misy kosa, izay tsy mandeha intsony raha vao apetraka.
Toa tsara ity jailbreak avy any Pangu ity. Rehefa avy nanamarina ny fahamarinan'izy ireo sy ny hafainganan'ny valin'ny mpamorona manan-danja toa an'i Saurik, miaraka amin'ny tsy fisian'ny fifandirana eo amin'ireo ekipa mpifaninana hatrizay, dia nitondra fitoniana teo amin'ny tontolon'ny jailbreak izy ireo. Na dia nanamarina aza ny maro taminareo, maninona no mangataka aminay izy ireo mba hiditra ao amin'ilay rool mba hanamboarany jailbreak?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Jailbreak » Fanavaozana lehibe amin'ny PreferensiLoader dia manampy fampifanarahana amin'ny iOS 9
Mazava fa raha mangataka antsika hiditra amin'ilay roul izy dia satria ny iray amin'ireo fanararaotana mety hampiasa ilay roul ho toy ny fahalemena na fidirana amin'ny iphone.
Talion dia hoy izy:
Io zavatra io ihany no noheveriko fa ny Jail of Pangu dia nampiasa fanararaotana ilay roul, fa ny marina dia tsy hitako fotsiny.
Mamaly an'i Talion
Podcast 2x06: Chipgate, Burngate ary maro hafa
Apple TV 4 dia mampiditra pikantsary vaovao mahatalanjona